Maamulka Koonfur Galbeed: Nabadsugidda ayaa wasriir ku weerartay Jaziira – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maamulka Koonfur Galbeed: Nabadsugidda ayaa wasriir ku weerartay Jaziira
Mareeg.com: Maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in ciidamada nabad sugidda dowladda federaalka Soomaaliya ay weerar ku qaadeen wasiirka ganacsiga iyo warshadaha maamulkaasi Cabdullaahi Sheekh Xasan Xilli uu ku sugnaa deegaanka Jasiira ee gobalka Shabellaha Hoose.
Wasiirka Amniga maamulka Koonfur Galbeed Cabdifitaax Geesey ayaa sheegay in weerarkaasi ay qaadeen ciidanka Nabad sugidda ee NISA, isaga oo tilmaamay in ay aad uga xunyihiin wixii dhacay.
“Dowladda Soomaaliya waxaa laga doonayaa in jawaab cad ay ka bixiso falkii gardarada ahaa ee Shabellaha Hoose lagu soo weeraray, laguna burburiyay astaantii maamulka Koonfur Galbeed” ayuu yiri Geesey.
Dhinaca kale waxa uu sheegay Wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed in dowladda Federaalka ah lagu wargeliyay in ciidamo ka tirsan Koonfur Galbeed lageynayo Jazeera, hase ahaatee iyadoo wax walba la og yahay lagu xad gudbay.
Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ayaa shalay burburriyey boor weyn oo Maamulka Koonfur Galbeed suray deegaanka Jazeera, halkaasoo oo uu warbaahinta kula hadlay, C/llaahi Sheekh Xasan oo ah Wasiirka ganacsiga iyo warshadaha maamulkaasi.